I-Vungle: Yenza imali ngohlelo lwakho lokusebenza lweselula ngamavidiyo angaphakathi nohlelo | Martech Zone
Isikhala sohlelo lokusebenza lweselula sinokuncintisana impela futhi nezinsuku zokwakha uhlelo lokusebenza, ukukhokhisa izinkulungwane zemali, futhi ukulindela ukuthola imbuyiselo yakho ekutshalweni kusekude kakhulu nathi ezimbonini eziningi. Kodwa-ke, ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo nokukhangisa okungaphakathi nohlelo kuyaqhubeka nokusiza ekwenzeni imali ngokutshalwa kwezimali okumangalisayo abathuthukisi bomdlalo nabasetshenziswayo.
Ihlathi ungomunye wabaholi kule mboni, enikeza abashicileli i-SDK eqinile yezikhangiso zamavidiyo ezisebenzisanayo ukwenza imali ngezinhlelo zabo zokusebenza, nokunikeza abakhangisi bamavidiyo ithuba elimangalisayo lokufinyelela kubabukeli abahamba phambili. Amanye amakhasimende abo abone ukwanda kwe-10x ekwenzeni imali.
Abakhangisi bathembele kubuchwepheshe bokusungula be-Vungle, ukukhomba nokulethwa kwezikhangiso zevidiyo ze-HD ukufinyelela nokuthola abasebenzisi benani eliphakeme emhlabeni wonke. Abashicileli abaphezulu bathembele kuVungle ukwenza izikhangiso zamavidiyo ezisebenzisanayo ezithuthukisa umuzwa womsebenzisi, zikhulise ukuzibandakanya komsebenzisi futhi zikhiqize imali engenayo ethe xaxa. I-Vungle ngokungaguquguquki ibeka u- # 1 wokugcinwa komsebenzisi okwenziwa ngamapulatifomu ngezinkomba zokusebenza kwemboni.
IVungle iqongelele ukubukwa kwamavidiyo ayizigidi ezi-2.5 kuzinhlelo zokusebenza zamaselula ezingama-20,000 ngendlela yazo ehlanganisiwe yokusebenzisa izikhangiso zamavidiyo kumsebenzisi womdabu.
Isikhulu esiphezulu u-Zain Jaffer wasungula le nkampani ngo-2011 futhi wayandisa ngempumelelo emhlabeni wonke eminyakeni emihlanu kuphela. Eqinisweni, kuye kwaba njalo ubukhona obukhulu eChina (kanye nesifunda esibanzi se-APAC, salolo daba), futhi sisebenza nonjiniyela abakhulu nabalingani bomkhangisi abanjengo IZynga, EA, iSmule, iGoogle, iHonda, i-Allstate, iL'oreal, iCoca-Cola neNissan, Phakathi kwabanye.
IVungle inikeza abakhangisi amandla okwenza lokhu:
Ukuhlolwa kwe-A / B ubuciko bakho ngesikhathi sangempela kuzinhlelo zakho zokusebenza.
Yazisa abasebenzisi ukuthi bathathe izinyathelo abazifunayo nge- amakhadi wokuxhumana asebenzisanayo kumayunithi wakho wesikhangiso.
Nquma ukuthi abasebenzisi bakho bazibona kuphi izikhangiso ukufakwa kwesikhangiso okuguquguqukayo.
Ngokushicilela ividiyo engaphakathi nohlelo kuhlelo lokusebenza olufanele, i-Vungle ingakhuphula ukutholwa nokufakwa komunye uhlelo lokusebenza lweselula ngokukhomba izethameli nezinhlelo zokusebenza ezifanayo ngokuthenga kwesikhangiso kohlelo. IVungle inikeza kokubili ukushintshaniswa kwezikhangiso nemakethe yangasese ukufinyelela izethameli ze-premium kuzinhlelo zokusebenza ezishisa kakhulu.
Landa i-SDK kaVungle
Tags: androidi-apulaizikhangiso ezingaphakathi kwegeyimuizikhangiso zevidiyo ezisebenzisanayoiOS-Microsoftukushintshaniswa kwesikhangiso sevidiyo ephathekayoizikhangiso zamavidiyo weselulaukuthenga kohleloividiyo yohleloukuthengwa kwesikhangiso kwevidiyo ehlelekileizikhangiso zevidiyo